आइटम गर्ल राखी सावन्तको हट अवतार ! (फोटोफिचर) – Sthaniya Sarkar | - Nepal's No.1 News portal
आइटम गर्ल राखी सावन्तको हट अवतार ! (फोटोफिचर)
एजेन्सी । बलिउड आइटम गर्ल राखी सावन्त एकाएक हट अवतारमा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेकी छिन् ।
हट एण्ड बोल्ड अवतारका कारण चर्चामा रहने उनी पछिल्लो समय विवाहका कारण बढी चर्चामा आएकी हुन् । उनले एक एनआरआइसँग गुपचुपममै विवाह गरेको विषयले उनको चर्चा चुलिएको थियो ।
विवाहको विषयलाई लुकाउँदै आएकी राखीले पछिल्लो एक अन्तर्वार्ताका क्रममा आफूले युरोपमा बस्ने रितेश नाम गरेका व्यक्तिसँग विवाह गरेको बताएकी थिइन् । विवाहपछि राखी निकै उत्साहित देखिएकी छिन् । उनले विवाह गरेका केही तस्वीर पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्वजनिक गरेकी छिन् ।
इन्स्टाग्राम लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय राखीको फ्यान फलोइङ पनि निकै लोभलाग्दो छ । टिकटकमा रमाउने राखीले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेका केही तस्वीर यस्ता छन् ।